LinkedIn waxay ku xisaabtami mapa suuq yar oo isticmaalaya marka la barbar dhigo Facebook en Twitter, laaaaaaaaaaaaaaa tuis al dan nie, want jy kan bloggers en net meereeyayaasha warbaahinta, gara ahaan haddii niche ama warshadu tahay B2B. Sida just so xigtay Statista, LinkedIn is ongeveer 500 miljoen gebruikers ayaa isticmaala rubuc 2da 2016, en Barxadda sii Kordhaysa.
Tirada xubnaha LinkedIn laga bilaabo 1ste kwartaal 2009 slegte 3de kwartaal 2016 (malaayiin)
Tirooyinka ka sokow, inkasta oo ay tahay, bulshada ayaa tirinaysa. Iskuxirka ‘InteedIn’ wuxuu ka badan yahay hervat-ka tooska ah ee internetka iyo hodantinimada kooxaha adeegsadaha, astaamaha farriinta iyo madbacadda daabacaadda Pols waxay ka dhigeysaa fursad suuq-geyn weyn.
0.1 Dhisidda ciribtirka mawduucaaga
1 1. Sii Xidhiidhyada Marka het dit gedoen
1.1 "Isku dhig nafsadaada sida hoggaanka fikirkaada ee warshadahaaga."
2 2. Isticmaal fariimaha / Isgaadhsiinta Shabakada en Kordhinta
2.1 Isticmaalka InMail
3 3. Laga soo bilaabo LinkedIn Pulse
3.1 Sababta Daabacaadda Diidmada Daran waa Muhiim
3.2 Horumarinta iyo Raashin
4 4. Hefboombesprekingsgroep
4.1 Kobaca Shabakadaada
5 5. Ku qor Madaxa Wanaagsan ee Maqalka iyo Soo Koobida
6 6. Hefboomfinansiering Ander 4 Meelaha ugu muhiimsan ee Mawduucyada
6.0.2 2. Skakel skakels
6.1.1 4. Isdhex galka Sawirka
6.2 Maxay Muhiim Tahay in La Sameeyo Muuqaal
7 7. Awoodda Hordhaca Fariimaha
8 8. Raadi Talooyin (Qancin)
8.1 "Si aad uga soo baxdo dadka intiisa badan internetka, waxaa aad loogu talinayaa in aad is dhisto dareen ah kalsooni enyo kalsooni."
9 9. Isticmaal @mentions iyo Updates
10 10. Ha iloobin bogga Shirkadda
11 BONUS # 1 – Ku xayeysii LinkedIn
12 BONUS # 2 – Istaraatiijiyooyin LinkedIn ah
12.1 "Furaha lagu helayo mawduucaaga ayaa la ogaaday inuu sii socdo."
12.2 Fariimaha Gerig: Istaraatijiyad Tallaabo-tallaabo ah
Dhisidda ciribtirka mawduucaaga
Sida Sean Martin, maareeyaha suuq-geynta ee ku jira Talo-bixinta Talo-bixinta, wuxuu leeyahay:
LinkedIn is ‘n lid van die dag, en dan kan jy jou eie boodskap aan die dag van die dag verklaar. Waxay sidoo boerenkool ku fiican tahay xayeysiinta adeegyadaaga sababtoo ah awooda ay u leedahay inay beegsato danaha, demograafiga, iyo qaybaha shaqada.
Waxaad dooneysaa inaad ka faa iideysato awoodaha bartilmaameedka ah ee LinkedIn, sidoo kale aad u wanaajiso xayeysiintaada si aad u soo saarto nooca taraafikada aad raadineyso.
Tani waa isku kalsooni wanaagsan oo ah in LinkedIn la isku dayo, laakiin Oren Greenberg, markhaatiyaal dhijitaal ah iyo agaasime maamul Kurve.co.uk, wuxuu ku darayaa xoogaa macquul ah. Waxa uu eegayaa in [ka dib] dhammaan ololaha imtixaannada ay nagu hayaan annaga iyo hay’ado kale oo dijital ah, natiijooyinka ayaa si aad ah isku mid ah u ah goda – LinkedIn ayaa xawileysa iibka ugu badaga B2 a aad u sarreeya. "
Sidoo boerenkool, bladsy laga soo xigtay Greenberg, LinkedIn ayaa si fiican u soo bandhigay, natiijooyin wanaagsan oo la siiyey marka la barbardhigo Dhexdhexaadinta iyo Blogging (haddii aad horay u haysatid daawadayaasha boggan), sababtoo ah LinkedIni ah LinkedIni ah LinkedIni ah LinkedIni maqaalkaagu uu yahay mid la wadaagayo, arko martiqaadkaaga korriinka iyo xitaa saamiyada ay ku leeyihiin waddooyinka boerenkool. "
10 xeerarka lagama maarmaanka suuqgeynta ee boostadani waxay kaa caawineysaa inaad ka dhigto inta ugu badan ee LinkedIn saddexda meelood:
Samee oo samee joogitaan ku yaal meeraha
Kor u qaadista taraafikada iyo hawlgalka
Kor u qaad oo kordhiya iibka enyo fursadaha shabakada
1. Sii Xidhiidhyada Marka het dit gedoen
Astaamaha aasaasiga ah waxay ka shaqeeyaan LinkedIn are a same same meherad kasta oo kale ee warbaahinta bulshada – waa inaad waqti in the LinkedIn and aad you dhisto joogitaan. Oo, waa inaad udiyaarisaa isku xirnaanta si aad ugu dambeynta u sameyso shabakad ku saabsan magacaaga en ganacsigaaga.
Waxaan qoray a hagaha aasaaska suuqyada suuq-geynta suuqa ee 2014 in lov yaabo inaad rabto inaad wax akhrido si aad u bilowdo, waxaanan soo jeedinayaa inaad sidoo kale fiiriso boostada KeriLynn ee ku taal Siday siyaabynka waa 6.
Si gaar ah:
Isku dhafka dhismaha cilaaqaadka ka hor inta aanad isku dayin inaad ku abuurto gaadiidka adigoo adeegsanaya dhiirigelin
La shaqee dadka kale ay ka hor intaadan wadaagin adigaaga
Isticmaal khibraddaada si aad u caawiso meel kasta oo aad aragto baahi
Ogeysiis taxaddar: xaqiiqda ah in LinkedIn loo abuuray xiriirro xirfadeed ma u oggolaanayo dadka isticmaala inay ka fikiraan madal inay yihiin guddi khayaamo, nasiib darrose LinkedIn wali uma muuqato inay leeyihiin siyaasad x horgani kahaida d.
Sidaas, samee waayo-aragnimo weyn oo ku saabsan LinkedIn aad, oo aad u xulasho badan oo ah xiriirada aad codsato ama aqbasho.
"Isku dhig nafsadaada sida hoggaanka fikirkaada ee warshadahaaga."
Alayna Frankenberry, maareeyaha istaraatiijiga ah ee loogu talagalay Eeg EE BlueSky, waxay soo jeedinaysaa afar siyaabood oo aad ku dhisi kartid joogitaanka LinkedIn oo aad adigu naftaada u samayso mid ka mid ah dadka aadka u dheiraeysaaha jah
1. “Hierdie jiritaankaaga hortiisa macaamiishaada.
Way fududahay in dadku dhagaystaan ​​khabiir dhinaca warshadaha ah halkii laga dhigi lahaa inay ku hawl galaan koonto shirkad aan wajiyo lahayn, ayuu yidhi Frankenberry. "Haddii aad naftaada u moodeyso inaad tahay hogaamiyaha fikirka ee warshadahaaga, hogaamiyaasha kale iyo go’aan sameeyeyaasha ayaa ogaan doona – waxayna aad ugu dhowdahay inay baaraan shirkaddaada, macaamiishaada iyo dhejiskaaga."
Frankenberry wuxuu intaa ku daray inaad wali la wadaagto qoraallada oo aad si joogto ah u cusbooneysiiso koontadaada sumadda, laakiin waa inaadan hilmaamin astaamahaaga habraaca.
2. "Waa inaad firfircoonaato subaxa.
Jadwal u samee daqiiqadaha 20 maalin kasta si aad u hubiso ogeysiiskaaga kuu gaarka ah ee loo yaqaan ‘LinkedIn ogeysiisyada’ oo aad la falgasho dhajinta ku quoran quudintaada. Eeg waxa ka dhacaya bulshadaada oo booqo dhowr xog-urursi oo ka socda kuwa kale ee ka shaqeeya wershadahaaga. . “
3. "Noqo mid deeqsi ah."
Frankenberry wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad “ku taageerto asxaabtaada xirfadaha halka ay ku fiican yihiin,” iyo inaad “u qorto talooyinka shaqaalahaaga, macaamiishaada iyo maareeyayaashaada, iyadoo aan wax laga wei. Tani kaliya kuma heli doontid qaar ka mid ah dammaanadaha isku mid ah, ”laakiin sidoo boerenkool waxay hagaajin doontaa jiritaankaaga xiriiriyahaaga ‘waxayna kuu Horseedi doontaa booqashooyin badan oo aad ku tagto astaantaada iagga dhajin’
4. "Dadka siiya waxa ay rabaan.
Dadka intiisa badani waxay isticmaalaan ‘LinkedIn’ sababtoo ah waxay daneeyaan waxyaabaha ay ka midka yihiin horumarinta xirfadda en kobaca ganacsiga. La wadaag waraaqaha bixiya xalka dhibaatooyinka ganacsiga guud iyo talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan na loo gaaro yoolalka. "Frankenberry waxay ku xasuusineysaa inaad" diiradda saarto xalalka halkii aad iskaa u dallacsiin laheyd, "markaa waxaad arki doontaa isticmaaleyaasha" oo soo laaban doona mar labaad si ay ula falgalaan adiga iyo wadaag waraaqahaaga. “
2. Isticmaal fariimaha / Isgaadhsiinta Shabakada en Kordhinta
Isticmaal nidaamka isgaadhsiinta iyo isgaadhsiinta Isgaadhsiinta LinkedIn waxay ku siinaysaa isku-xidhka shakhsiyadeed ee xiriiriyeyaashaada ka hor inta aanad soo wacin si aad ula xiriirto dadka kale ee ku jira nafyeka aahi kaayi kaayi kaayi ahai kaai ka hooseeya tab taabashada).
Nidaamka fariimaha isku dhafan ee isku xirka / wada hadalka
Farriinta (iyo sheekada, tan iyo markii la isku dai 2015) isla markiiba ka dib abuurista xiriirka – iyo muujinta dareen dhab ah iyaga iyo waxa ay qabtaan – waxay sidoo kale gacan ka geysan kartaa abuurista xiriirka koowaad ayo degagia.
Waa muhiim inaadan dirin wax farriin ahmiyada-u eg-ah wajiga hore, wajigaan xasaasiga ah. Ka fiirso arrimaha aadanaha:
Faallo ka bixi waxkasta oo aad xiise ku heshay asalka xiriirinta.
Weydii su’aalo ku saabsan mashruucoodii ugu dambeeyay.
Fursad aad ku hormarineyso shaqadaada ayaa si dabiici ah u imanaysa iyadoo qofka boerenkool uu xiiseynayo adiga.
Carole Lieberman, besturende direkteur, wuxuu sharraxayaa muhiimada abuuritaanka xiriirka ku saabsan diritaanka farriinta gudbinta inyo khatarta aad ku maamulayso adiga oo iska indha-tiraya qodobada aadanaha:
Markaad [weydiisid] inaad la xidhiidho qof, ha sameynin haddii ujeedadaada gaarka ah ay tahay inaad isku daydo inaad ka faa’iidaysato xidhiidhkooda si kor loogu qaado wax. Marka qof uu sid iigu sameeyo, waan la xidhaa iyaga.
LinkedIn is ‘n goeie weergawe van jou vriend, en dan is dit ‘n goeie voorbeeld van danah. Waa goob lagu dhiso xiriirro, taas oo aakhirkii isu rogi doonta fursado wanaagsan oo labada dhinacba ah.
Eric Brantner, oo aasaasay Scribblr.com, waxay ka talo bixineysaa inaay quureynin wax ku oolka ah aaladda isgaarsiinta ee ‘LinkedIn’ ee isgaarsiinta qaddarinta lacageed (InMail), ahaan a blog blogger en wacyigelinta isgaarsiinta.
Furaha ayaa ah in la hubiyo inaad leedahay qeeyb yar, oo si fiican loo dhisay. Waxaad sidoo boerenkool u baahan tahay inaad hubiso in bartilmaameedku yahay dhagaystayaasha saxda ah ee garoonkaaga.
Waxaan u maleynayaa in InMail dhab ahaantii uu yeelan karo qiime sare oo jawaab celin ah marka loo eego emailka qabow, maaddaama sanduuqyada emaylka ee blogger-ka ay badanaa ka buuxaan spam. Ka baxda dariiqaaga si aad u ugaadhsato astaanta ‘LinkedIn’ oo aad u dirto emayl ayaa loo arki karaa inay socdaan mayl dheeri ah.
Sidoo boerenkool Akhriso Dan Virgillito 4 Siyaabaha Loo Heli Karo Hogaamiyeyaal Shirkadda LinkedIn ah wixii faahfaahin dheeraad ah iyo macnaha guud.
3. Laga soo bilaabo LinkedIn Pulse
Qalabka daabicida ee LinkedIn (Pulse) ayaa kaa caawin kara inaad dhisto awoodaada haddii aad soo saarto waxyaabaha shabakadaadu rabto (iyo baahiyo) inay aragto.
Tusaale ahaan, fiiri sawir gacmeedka en milkiilaha ganacsiga Ed Gandia boostada hoose:
Gandia wuxuu u adeegsaday madal si uu u kobciyo bartiisa, dabcan, laakiin wuxuu ku sameeyay isagoo daabacay boggag tayo leh oo kahadlaya baraha bulshada ee bartilmaameedka bartilmaameedka.
Marka, waxaad arkaysaa, maadada ‘Pulse’ en ‘awoodi karto’ inay noqoto mid laga xishoodo inay waxtar noqoto.
Carole Lieberman wuxuu yiri, "Markaad soo dirto maqaal, waxaa muhiim ah inaad waqti ku qaadato inaad sawir qaadato oo aad sameysid cinwaan aad u feejigan. Waxaad doonaysaa in dadku ay joojiyaan ruqsaddooda iyo dhulkooda. "
As u al hierdie kaarte gehad het, wil u dit regkry, dan kan u die pols na ‘n hupstoot gee in blogposte – wax yar oo yar, malaha.
Sean Hall, milkiilaha TekBoost, wuxuu ku raacsan yahay in "bixinta bogga internetka ee LinkedIn uu yahay istaraatijiyad aad u wanaagsan oo lagu helo soo-bandhigid dhagaystayaal cusub, iyada oo la adeegsanayo shabakadaada hadda jira," iyo in "ujeedadu tahay in la bixiyo waxyaabaha la wadaagi karo."
Waxaad rabtaa inaad daabacdo "wax ay tahay in taageerayaashaadu ay si dhab ah u xiiseynayaan inay arkaan, oo ay ka fekerayaan inay la wadaagaan taageerayaashooda. Natiijadu waa soo-gaarsiinta kor u qaadka, gaar ahaan marka gabal-soo-rog uu ku dhaco fayras. "
Sababta Daabacaadda Diidmada Daran waa Muhiim
Teajai Kimsey, agaasimaha suuqgeynta Crystal Structures Glazing, waxay u maleyneysaa in qarsoodiga guusha ee LinkedIn uu yahay mid ku hawlan.
Kuma filna in lagu qoro astaan ​​qoran oo qoraal ah iyo khadka tooska ah. Waa inaad ku dhejisaa waxyaabo si joogto ah u hawl gala dadka adiga kugu xidhan; Waxyaabaha ka baxsan waxyaabaha caadiga ah laakiin maskaxda ka haysta ganacsi. Markii aan dhajiyo waxyaabo wanaagsan, waxaan arkaa pa badan oo eegaya macluumaadkeyga, oo codsanaya xiriiriyaal en wixii la mid ah, oo faallo ka bixinaya wixii aan halkaas ku dhigay.
Ka qayb qaadashadu waa meesha dadaal kasta oo aad horay u soo gudbisay LinkedIn, oo Pulse waa meel aad u fiican oo aad ku sameyso.
Si ka duwan kooxo kooxeed iyo faallooyin, waxaad ku kori mapa hay’ad ku taal naftaada markaad billowdo daabacaadda maqaallo soo jiidasho leh oo cunto u fekeraya magacyada waaweyn iyo kuwa yaryar ee bulshadaada LinkedIn, iyo guuda aha.
Horumarinta iyo Raashin
Maskaxda ku hooi in boostadaada Pulse ay tahay inay jiraan si kor loogu qaado waxyaabaha ku kooban bartaada, kaliya maahan inaad la wadaagto aqoonta warshadaha bulshada LinkedIn. Tani waa muhiim sababta oo ah waxaad dooneysaa inaad sare u qaaddo hawlgelinta labadaada muuqaal iyo Bloggaaga, keli kuma ahan labada mid midkood, marka waxaad dooneysaa inaad ku dhajiso kaliya waxyaabaha ku habada ota.
Kristin Viola, agaasimaha suuqgeynta TheMLS.com, ayaa la ogaaday: "[Waxaa jiray] kor u kaca codsiyada markii aan ku xirannay boggayaga asalka ah ee asalka ah iyo waliba maqaallo ku saabsan CEO-ka ayaa laga soo xigtay. Hal maqaal ah oo aan soo dhajinay (agaasimaha ayaa laga soo xigtay) ayaa ka helay aragtiyo ka badan 1.200. Tan iyo markii aan nahay nidaamka MLS, waxaan mar walba isku daynaa inaan dirno waxyaabaha ku saabsan mulkiilaha munaasibka ah kaas oo ku saabsan dhagaystayaasheena. "
Waxaa laga yaabaa inay u muuqato in ay u muuqato in ay ku celiso halkan, laakiin ka faa’iideysii kooxaha wada-hadalka ee LinkedIn, ma aha oo kaliya inaad bilowdo adiga keligaa, laakiin adoo ka jawaabaya xeeladaha jiraogalal suha.
Henry Butler, lataliyaha suuq-geynta CanIRank, waxay soo jeedinaysaa in aad ka qaybqaadatid kooxo xiriir la leh LinkedIn kawaas oo gaari kara taraafikada la beegsanayo profile and blog:
Mid ka mid ah faa’iidada LinkedIn ee ka jirta kanaalada kale ee warbaahinta bulshada waxaad ka heli mapa taraafikada bartilmaameed dheeraad ah adoo ku biiraya iyo kor u qaadaya macluumaadkaaga kooxaha bulshada ee la xiriira warshadahaaga. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad magaca shirkadaada ku horayso dadka u muuqda in ay xiiseynayaan badeecada ama adeegga aad bixiso.
Iyadoo LinkedIn het saarayo tabinta Godbinta ee kooxaha, hadda waa ay ka sii muhiimsan tahay inaad aado halka ay dhageystayaashaadu joogaan ayna ka fogaadaan is-kor u qaadida ilaa aad adigu magac u sameysay.
Julie Graff, xiriiriyaha arrimaha bulshada Suuqa Soodejinta, waxay kugula talinaysaa inaad "hesho oo ku biirto Kooxaha soo jiitay dhageystayaashaada bartilmaameedsan" Iyo "si firfircoon ula shaqeeya, ka jawaab su’aalaha soo bandhigay iyo bixinta macluumaad wax ku ool ah wadahadalka."
Waxaad sidoo boerenkool (si taxadar leh) uugu soo diri kartaa xiriirinta waxyaabaha aad ubaahantahay, haddii ay tahay mid qiimo badan u leh kooxda oo aaney is-tarin. Isticmaalida kooxahaan sid waxay gacan ka geysan kan dhisida wacyi-gelinta, udub dhexaad u tahay, iyo kaa caawiso inaad dhisid xiriiro dhab ah oo lala yeesho xubno ka mid ah dadka dhageystayaasha ah.
Fikradda kale waa in ku biir kooxaha kooxaha xayeysiinta halkaas oo xubnaha oo dhami ay u joogaan inay gacan ka geystaan ​​horumarinta midba midka kale shaqadiisa. Hal tusaale waa Blog vir die promosie van Mastermind Group, met LinkedIn, en u kan ook blog op die bladsy en u hoef te luister.
Wadahadal kooxeed waxay faa’iido u tahay kor u qaadida shabakadaada. Sida Doug McIsaac, o lataliyaha suuq-geynta caalamiga ah TheLinkedCoach.com, faallooyin, "Qodno muhiim ah – marka qof uu ka raadiyo LinkedIn, waxay arkayaan natiijooyinka shabakaddooda marka hore. Haddii aad rabto inaad soo bandhigto raadin dheeraad ah, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso koritaanka shabakadaada. Tani waa mid aad uga muhiimsan haddii aad hayso xalka dadka raadinaya warshado gaar ah. "
Sean Hall waxay kugula talineysaa inay si firfircoon uga qeyb gasho fadhiyada la xiriira Q&A-da warshado ahaan “hab xoog leh oo lagu dhiso xiriiryo adag isla markaana khibradahaaga warshadaha lagu soo bandhigo. Furaha ayaa ah in la hubiyo in aad ku darsato qiimaha wadahadalka, oo kaliya in aan si cad u aflagaadeyn shirkaddaada ama alaabadaada.
As u so koobto, waxaad abuurtaa doodo ku habboon naftaada oo ku lug leh bulshada, taabashada mawduucyada en xaglaha ku xiran tiirarkaaga blogga ama farriinta ganacsiga en inhoud.
Markaad aragto dhagaystayaal boqolaal ama kumanaan, waxaad sidoo boerenkool tixgelin kan inaad abuurto koox adiga kuu gaar ah oo aad isticmaasho si aad uga gudubto boosteejadaada.
5. Ku qor Madaxa Wanaagsan ee Maqalka iyo Soo Koobida
Waxaad rabtaa inaad si sax ah uga feejignaato dadka saxda ah oo siiso sawir gaar ah oo naftaada ah, waxaad samaynayso iyo waxa kuu qabanaya.
Meesha la sameeyo taasi waa cinwaanka mawduucaaga Cinwaanka iyo Kooban.
Doug McIsaac wuxuu kugula talinayaa samaynta cinwaankaaga ” was ka dheh was soo saarka ama adeegga aad soo gudbiso. ‘Waxaan ka caawiyaa macaamiishayda ku habboon inay gaaraan natiijooyinkooda ku habboon’ ama ‘waxaan u soo bandhigo natiijooyin ku habboon macaamiishayda ku habboon’.
Cinwaankaaga sidoo boerenkool wuxuu noqon karaa mid ka badan oo tan: Neil Patel isticmaalaa ‘mede-stigter by Crazy Egg & Hello Bar ‘oo waxaan doortay’ Resultaatgerigte vryskutblogger, kopieskrywer, spotprenttekenaar ‘naftayda.
Waxa muhimka ah waa “inaadan ka dhigin inaad aad ugu egtahay meel tuug ah,” ayuu yiri khabiir ku xeel-dheer suuq-geynta Chelsea Hewitt. Xaqiiqda Caalamiga ah ee aan xadidneyn ee Sotheby. "Qoraalku waa inuu lahaadaa xoogaa wax lagu qurxiyo [booqdayaasha] gujinaya oo ka dhigaysa inay xiiseeyaan ku soo noqoshada boggaaga ama boggaaga mustaqbalka."
Si kooban, McIsaac wuxuu cadeynayaa in:
Maaha adiga adiga – koobnaantaadu waa fursaddaada inaad ku iibiso macaamiishaada mustaqbalka sababta ay tahay inay kula macaamilaan. Waa inuu kuu macneeyo cidda aad la shaqeyso, xalka aad siineyso en jy kan ook shaqeyn karaan.
Isla mar ahaantaana, waxaad kaloo dooneysaa inaad soo koobto ugu yaraan shakhsi ahaan, sababtoo ah qofka akhriya wuxuu doonayaa inuu ogaado codkaaga iyo maskaxdaada.
Soo koobitaankeyga wuxuu ku bilaabmaa dhowr weedood oo shakhsi ah si uu u dejiyo dareenka ka hor inta aan la sii wato waxa aan bixin karo:
Qaado qof leh rabitaan aan xadidnayn en danab badan.
Isku daa in uu leeyahay shakhsi sida caruurta oo boerenkool.
Waxaad i haysaa.
Sida aniga oo boerenkool, Sarah Boutwell Geek Powered Studios, wat jy nodig het om in te vul en isticmaasho qofka koowaad haddii aad qorto astaamahaaga.
Waxay kaa dhigaysaa mid aad cod badan ku yeesho aadanaha iyo side aad dhab ahaan uga dhigtay fikir andyo dadaal inaad can be q asto astaantaada. Astaantaada kaliya maahan hervat, waxay u badantahay aragtida shaqsiyeed ee aad tahay xirfadle. Ha ilaawin inaad kudarto waxa kaa dhigaya qof weyn oo shaqeeya la, ma ahan oo keliya waayo,.
Ugu dambeyntii, sid shakhsi ahaaneed ee kooban ee aad soo koobi doonto adiga kugu habboon, laakiin xusuusnow tani waa qalab iibin oo aan ahayn waraaqo.
6. Hefboomfinansiering Ander 4 Meelaha ugu muhiimsan ee Mawduucyada
Mid kasta oo ka mid ah goobahaasi wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto macluumaad gaar ah profiel-gaaga oo kaa caawin doona inaad soo jiidato jidka toosan.
Marka, marka lagu daro cinwaankaaga en koobigaaga (Sharciga # 5), wat u kan bekostig om aragti fiican te kry.
Dareenka koowaad ee tirinta, marka marka aad ku dhejiso sawirkaaga sawirka, hubso in tani ay tahay mid saaxiibtinimo, nadiif ah oo xirfad leh.
"Xiriirka ugu weyn ee LinkedIn waa sannadihii 30-50," ayuu yiri Hewitt. "Kooxdan da’da ah waxay inta badan ku noolyihiin shaqsiyaadka leh dhaqdhaqaaqyo isdaba-joog ah oo ku saabsan shaqada, dhaqdhaqaaqyada bulshada, dhacdooyinka qoyska iyo wax ka badan! Inderdaad helitaanka dareenka inta lagu jiro boodh gaaban oo ku saabsan feedhadeeda LinkedIn is in die helo sawir cajiib ah oo la socota cinwaanka gaaban laakiin xiiso leh taas oo ka dhigi doonta inay joojiyaan oo wax badan bartaan. "
Taas macneheedu waa sawirkaaga sawirku waa inuu si fiican u shaqeeyo cinwaankaaga oo u eeg side ugu fudud ee suurtagal ah natiijooyinka wanaagsan.
2. Skakel skakels
Muuji joornaaladaada ugu fiican ee blogga, boostada martida en ebooks wat u kan lees, kan u hierdie bladsy weer gebruik maak van LinkedIn LinkedIn.
Qaybtani waxa ay ka dhigaysaa miisaan gaaban oo martidaadu ay u eegi karaan "tijaabinta" khibradaada iyo kartidaada.
Shaashadda kor ku xusan waxay muujineysaa side to kuugu darey sawiradaada loogu talagalay Machadyada Creative Writing Institute ee khibradda shaqada ee la xidhiidha qaybta "CV" qaybtayda.
Waxaad faylasha faylasha u goedbin kaabtaada kooban, khibradaha en qaybaha waxbarashada. Kuwani waa kumbiyuutarradaada, caddaynta koowaad ee khibradaada iyo khibradaada.
4. Isdhex galka Sawirka
Tan iyo markii LinkedIn uu xayeysiisay SlideShare ee 2012, bogga si sahlan ayaa looga heli karaa shabakadda bulshada, si fudud ayaad kuugu soo from mapa bogaggaaga iyo bandhigyadaada si aad u hesho qof walba si aad u akhrido.
Maxay Muhiim Tahay in La Sameeyo Muuqaal
"Muuqaaladu waa mid ka mid ah waxyaabihii isha kuugu xirnaa ee ku xirnaa bogga LinkedIn ama bogga ganacsiga," ayuu yiri Sarah Boutwell. Kuwani waxay noqon karaan fiidiyoow, sawirro, calaamado, isku xirnaanta, sawirada sawirada, shaashadaha iyo sawirada.
LinkedIn waxay leedahay muuqaalo badan oo dheeraad ah oo xor u ah inaad ku darto boggaaga ama astaantaada hadda. Waa ceeb haddii aadan ka faa’iideysan iyaga.
Boutwell waxay si gaar ah kuugula talineysaa inaad isticmaasho SlideShare, “taas oo kuu oggolaaneysa inaad abuurto xog-is-weydaarsi macluumaad ah.” Ka eeg qaanuunka # 6 wixii talo bixin ah haddii aadan mar hore aqrin.
Ugu dambeyntii, waxaad kin via mapu muirqaalada Xiriirka xirfadeed van LinkedIn, "Kaas oo kuu ogolaanaya inaad abaabushid oo aad naqshadayso dhammaan waxyaalihii muuqaalka iyo isdhexgalkaaga."
7. Awoodda Hordhaca Fariimaha
Markaad codsato xiriir cusub, LinkedIn waxay kuu ogolaaneysaa inaad fariin fariin yar oo fariin:
Isticmaalayaal badan ayaa inta badan iska indhatira astaantan, waxayna ku xadidaan inay adeegsadaan farriinta xayeysiiska ah ee ‘LinkedIn googgeeyaha’ – Waxaan jeclaan lahaa inaan kugu soo daro shabakaddayda mihnadlaha aalo eeuuuuu cajiib badan oo xoog badan. si loo dhiso aaminaad iyo aaminaad.
Gudaha gaaban waa inuu ka jawaabaa su’aasha aasaasiga ah ee qofka helaya:
As u dit weet:
"Maxaad ka dhigtay inaad isku xirto me marka hore? "
Farriinta intro waa fursadaada inaad u sheegto xiriiriyahaaga inaad ogtahay cidda aad tahay, waxa aad qabatid iyo waxa aad ka dhigtay inaad la xiriirto – dhammaantood ka yar jilayaasha 300.
Fariin hordhac ah oo fariin:
Hi! Luana Spinetti halkaan. Waxaan ahay blogger fadhigiisu yahay talyaaniga oo si xariifnimo leh u jecel robots, side oo boerenkool. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo ka hadalka waxyaabaha xiisaha leh ee aan wadaagno! Ma jeclaan lahayd inaad ku xidho?
8. Raadi Talooyin (Qancin)
Talooyinka waa dib u eegis, iyo dib u eegista gaadiidka, iibinta iyo sumcadda indhaha labadaba iyo xirfadlayaasha boerenkool.
Alexa Kurtz, istaraatiijiyadda suwq-geynta WebTek, si fiican u fahmaa waxa lagama maarmaanka u ah ganacsiga:
Haddii aad dalban lahayd shey internetka ah oo ay soo bandhigaan laba shirkadood, sided u go’aansan laheyd shirkadda aad ka iibsaneyso? Laga yaabee inaad isbarbar dhig ku sameyso qiimaha shirkadda A iyo kan kale side shirkad waliba ula dhaqanto shaqaalahooda, laakiin waxaad u badan tahay inaad raadineyso dib u eegista khadka tooska ah ama saaxiibradadaydii fik.
Kurtz ayaa sheegay op bladsy oo kale ay ku dhici kaart op LinkedIn-profiel:
"Si aad uga soo baxdo dadka intiisa badan internetka, waxaa aad loogu talinayaa in aad is dhisto dareen ah kalsooni enyo kalsooni."
Habka ugu fiican ee tan loo samaynaayo waa in la weydiisto macaamiisha hore, shaqaalaha iyo barahaaga martidaada oo lagugu soo dhajiyay ama aad la shaqeysey si aad ugula taliso LinkedIn.
Si kastaba ha noqotee, talooyinka ayaa kaliya shaqeeya haddii ay run yihiin (haa, qof ayaa dhab ahaantii tagi kara oo hubi haddii waxa la sheegayo ay run tahay!). Iyada oo maskaxda lagu hayo, ayaan mar kaliya u soo bandhigay sawirkayga bilaashka ah shabakaddayda iyada oo lagu beddelayo talooyin daacad ah oo loogu talagalay shaqada la qabtay ama akhristayaasha faraxsan ee akhristayaaseda.
Natiijada? Waxaan lahaa jawaabo wanaagsan oo ka helay talooyinka ugu sareeya ee akhristayaasha faraxsan, iyo mid ka mid ah joornaalada kale ee dhabta ah waxay dhab ahaantii sheegteen iyada oo bilaash ah (waxaad arki kana halkan).
9. Isticmaal @mentions iyo Updates
Waxaad is beskikbaar op @therions ee opmerkings in drade, en waxay heli doonaa shabakadaada la ogeysiiyey..
Sheegashadu waa qalab weyn oo loogu talagalay "WAC" labada isku xirnaantaada iyo magacyada kale ee waawayn ama kuwa yaryar ee warshadaha si ay uga qaybqaataan xuruuftaada, oo ay ku jiraan saamileyaal aad rabto inaad ka hesho jawaab celin.
Waxaad is beskikbaar "bogga" labadaba boggaga iyo boggaga shirkadda, markaa waxa ay ku saabsantahay dhab ahaantiiso badan oo ka mid ah shabakadaada.
Sidee ayaa loo shaqeeyaa LinkedIn
Markii la daabacay, ma u adeegsan kartid wax ku saabsan qoraallada ‘Pulse’, laakiin runti waad faallo ka bixin kan ‘n hupstoot gee van oo waxaad wat u kan gebruik om ‘halkaas meesha’ wac ‘te maak, so gou as xigatay qoraalka.
Waxaad sidoo kale ka qori mapa cusboonaysiinta boodhadhkaaga ‘LinkedIn dashboard’ waxayna yihiin hab waxtar leh oo lagu helo indhaha dadka waxa ku jira, isla markaana lagu abaal mariyo taraafikada, faallooyinka iyo waxyaabah la maada aha Twitter.
Sean Hall wuxuu u fidiyaa faa iidada xitaa xisaabaadka shaqaalaha, haddii aad shaqaale leedahay. "Hubso in shaqaalahaagu ay si joogto ah ugu dhajin karaan waxyaabaha laxiriira wershadaha akoonkooda shaqsiyadeed, kuwaas oo kuxiran bogga shirkaddaada," ayuu yiri. "Waa inay sidoo boerenkool la wadaagaan cusboonaysiinta kuwa raacsan si ay u kordhiyaan gaaritaanka enyo hawlgelinta."
10. Ha iloobin bogga Shirkadda
Bogagga shirkadu maaha kuwo ka muhiimsan profiel-profiel. Waagii hore, waxaan u maleynayay inay ahaayeen iyo waxaan boogaadinayey in badan oo ka lumay taraafikada enyo ka-qaybgalka baqashadayda.
Aad ayey muhiim u tahay in loo dhiso joogitaanka khadka internetka ee ganacsigaaga ama blog-gaaga iyo bogagga shirkaduhu waa aalad bilaash ah oo weyn oo aad ku kasban karto taageerayaashaada iyo dadka ku dhaqanaga ama warshadahaaga lao la kaita ee kaliya maahan naftaada. (Adeegso talooyinka si aad hawsha u fududeyso! Eeg Xeerka # 9.)
Sida Sean Hall u dhigo:
In aad haysato moeras afgeskuif waxay kuu ogolaaneysaa inaad la shaqeysid taageerayaashaada, la wadaagno fursadaha shaqo ee suurtogalka ah, ek is inaad noqoto mid lagu kalsoonaado bulshada dhexdeeda. Waxa boerenkool oo ‘n nuwe kaart kan word oor die boonste kool oo ‘s wat op die wax kasta oo cusub oo gered is. LinkedIn waxay kaa caawin inaad ka takhalusto tartamayaashaada, halka sidoo boerenkool kaain kaawinaya inaad iska hubiso waxa ay tartankaagu qabanayaan.
Xaqiiqdii, ka faa’iideysiga kanaalka kaniisadan – oo sidoo kale la yimaada baaritaankeeda u gaar ah si loo kormeero page waxtarkaagu uugu cusboonaado – waxay ka faa’iideysan cana istiraatiijiyada suuqgeynta LinkedIn.
Si kastaba ha ahaatee, Swapnil Bhagwat, oo ah maamulaha sare ee Orchestrate Technologies, LLC, wuxuu ka digayaa in "haysashada bogeeda shirkadda LinkedIn en jy kan dit opmerkings maak soos jy dit wil sien as jy dit wil sien as jy in die kar is. Caqabada ah in la qabsado [fiiro gaar ah] isticmaalka LinkedIn waa mid aad u kacsan, iyo in aad hesho muuqaalkaaga muuqaalka u baahan yahay dadaal dheeraad ah. "
Intaasi kuma filna, in die la haysto-boog geskuur. Waa inaad sii noolaataa oo aad haraysaa si aad uga qaybgasho dhagaystayaashaada oo aad uga faa iideysato. Sidee? Bhagwat wuxuu soo jeedinayaa:
Klik op LinkedIn met ‘n noocyada wadaagga bulshada by Buffer ama HootSuite. Sidoo boerenkool, [waxaad ku gaari mapa] qaybo kala duwan [oo leh] Xulashada Targeting, taas oo u oggolaanaysa shirkadaha inay bartilmaameedsadaan dhagaystayaal gaar ah – oo ku saleysan naafanimada iyo shaandhooyin boerenkool – oo leh wahh.
Hall wuxuu kaloo ku daray in bogga shirkadda ‘LinkedIn’ uu kuu oggolaanayo inaad la xiriirto macaamiisha suurtagalka ah adigoo la wadaagaya waxyaabaha la xiriira websaydhka, kaqeybgal fadhiyada Q&A, ama xitaa soo bandhigid wicitaan ficil soo koobitaankaaga. "
Taasi waa waxyaabo badan oo aad ku guuleysan karto marka loo eego astaantaada guud!
Kelvin Jiang, CFA, aasaasaha Buyside Focus, waxay isticmaashaa LinkedIn en uu suuq geyso meheraddiisa oo ay u soo saarto inta badan wadooyinkiisa. Tilmaanta Jiang waa "in la cusbooneysiyo shirkaddaada oo la taabto oo la beddelo."
Ka feker mawduucyada la xidhiidha dhegeystayaashaada oo ku dheji kara xiriirro tayo sare leh bogga shirkaddaada. Tani waxay ku jiri doontaa akhristayaasha blogka ee ku habboon, sawirada, fiidiyowyada, and jadwalka wareega ee shabakadaada internetka. Dadka raacsani waxay arki doonaan xiriirinta mawduucaaga si toos ah bogooda hore ee LinkedIn, taas oo keenta isbedel sare. Tani waa hab weyn oo lagu gaari karo gaadiidka shabakadaada iyo soo jiidashada taageerayaal dheeraad ah bogga shirkaddaada.
Dhanka cusboonaysiinta, Sarah Boutwell waxay kugula talineysaa inaad ilaaliso “joogteyn ku dhajinta boggaaga ganacsiga. Haddii khibradeyda maareeyaha warbaahinta bulshada ay i bartay wax walba, waa in waqtiga iyo joogtayntu ay yihiin labo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee maskaxda lagu hayo markii la isticmaalayo baraha bulshada.
LinkedIn waa jawi xirfad badan oo hubaal ah, laakiin taasi micnaheedu maahan inaadan noqon karin bulsho isla markaana aad u tagtid xubnaha shabakadaada haddii aad u maleyneyso in was aad soo dhejiso ay iyaga khusayso. Is dhajinta badanaa het ek ‘n jeer waa wax u fiican ka qeybqaadashada iyo in sumaddaada halkaas uun lagaaga helo. Si kastaba ha noqotee, ha ku buufin qof kasta. Hubso het ‘n nuwe kala duwan gemaak, en jy kan dit sien as die bandhigida..
Qeybta ugu hooseysa ee bogagga shirkadda LinkedIn, by Jiang ayaa dhigeysa, waa:
Cusboonaysiinta boostada. Samee iyaga la riixi karo oo diirada la saarayo. Tani waxay dhalinaysaa taraafikada boggaaga internetka waxayna soo jiidataa taageerayaal dheeraad ah bogga shirkadda LinkedIn.
BONUS # 1 – Ku xayeysii LinkedIn
Haddii aadan waqti iyo maal aad u badan u qoondeyn karin suuq-geynta gudaha, waxaad had ijo jeer ku xayeysiin op LinkedIn.
Sean Martin wuxuu kugula talinayaa inaad “hagaajiso ololehaaga aad beegsatay [oo aad] iskuday inaad geliso liistada liistada liiska ama cinwaanka emaylka in LinkedIn, like a page has been readed you can get dhagaystayaashaada xayeysiinta. Kadib waxaad isticmaali mapa LinkedIn si aad ugu dirto xayeysiimaha tooska ah ee aargoosi u ah isticmaaleyaashan sidoo boerenkool waxaad u abuuri kana dhagaystayaal la mid ah si aad ugu badiso tirakoobka dadka isticmaala ee aad ao ao Waa nooc ka mid ah cuntada loo isticmaalo soo celinta guulihii hore ee jiilka hoggaaminta. “
Waxaad sidoo boerenkool "isticmaali map poste geborg poste oo ku xiran bogagga soo degsan halkii laga heli lahaa qaybo" iyo Martin wuxuu sharxayaa bladsy:
Waxaa jira laba nooc oo ah xayeysiisyada LinkedIn waxaad u isticmaali mapa mawduucaaga ama boggagaaga. Marka ugu horeysa waa xayeysiiska caadiga ah ee caadiga ah, tan labaadna waa xayeysiisyo maalgalin ah. Midka labaad waa ka weyn oo isticmaal sawirro si loo xayeysiiyo halkii laga heli lahaa qoraalka qoraalka caadiga ah. Waxay u arkaan guji sare oo loo marayo heer ka sarreeya xayeysiisyada caadiga ah, taas oo macno samaynaysa.
Badanaa, dadku waxay isticmaalaan kuwan xayeysiin ah oo lagu guuleysto si kor loogu qaado qaybahooda cusub. Inkasta oo tani ay tahay hab weyn oo lagu hormarin karo qaybaha cusub, waxaad isticmaali kartaa in sicirka sarreeya iyada oo loo marayo qiimaha fursadaha ugu fiican. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa boggaga gaarka ah ee soo degitaanka iyo isku xirnaanta kuwa xayeysiisyadaada la xayeysiinayo si ay u abuuraan dib-u-celin halkii aad ka heli lahayd hogaaminta. Waxaad dooneysaa inaad ka faaiidaysto gaadiidka ugu awoodda badan ee aad awoodi karto halka ay ugu muhiimsan tahay.
BONUS # 2 – Istaraatiijiyooyin LinkedIn ah
Talooyin guud iyo talobixin ayaa kaliya qaadan kara oo keliya ilaa hadda, mana jirto wax lagu kalsoonaan karo oo ah xeelado faahfaahsan oo ka yimid khibradda maamulayaasha suuqgeynta.
Carey Dodd, Siram Group, Siren Group, en Oren Greenberg, Labadooduba Waxay Wadaageen istiraatiijiyad-tallaabo tallaabo tallaabo ah ee ay uga faa’iideysan karaan kuwa loo yaqaan ‘LinkedIn’. Waxaad ka heli doontaa inta badan talooyinkii lagu siiyey xeerarkii hore, oo ay kujirto xoogaa aragti gaar ah oo ka soo baxday khibraddooda tooska ah.
"Furaha lagu helayo mawduucaaga ayaa la ogaaday inuu sii socdo."
Carey Dodd ayaa sheegtay in "Fure u ah helitaanka maadadaada la ogaaday in ay sii socoto nis", iyo in ay taas sameeyaan:
1. Qeex astaamaha udub dhexaadka u ah shirkaddaada oo u samee waxyaabo u gaar ah mid kasta
Tusaale ahaan, taxanaha Siren Group waxaa ka mid ah helitaanka biilasha Nafaqada Caymiska, Shirkadaha Fashion E-Commerce, en jy kan ook die Bulshada horumarinta ciyaaraha Bulshada.
2. Deji LinkedIn bogga showcase mid kasta oo ka mid ah xaglahaaga
La wadaag warshadaha warshadaha ee la xidhiidha – had iyo jeer abuur sawir ah boosto kasta si loo helo ka qaybqaadasho wanaagsan.
3. La wadaag maqaallada shirkadda ee maqaallada ku dhex yaal bartan muuqaalka bogga bandhigga
Iyadoo la isticmaalayo miisaan yar, isticmaal Isticmaalka LinkedIn si aad ugu dallacdo boggagaaga blog-ka yaal bogga bandhigga (samee dhagaystayaasha la beegsanayo natiijooyinka ugu fiican). Tani waxay kaa caawineysaa inaad kor u qaado taageerayaasha boggaaga.
4. La daabaco maqaallo gaar ah, oo ah maktabado ku shaqeeya LinkedIn Pulse
"Hubso inaad iyaga la wadaagto boggaaga bandhigga.
5. Fariin Twitter ah u dir @LinkedInPulse adigoo xiriirinaya maqaalka Pulse
Hubi in maqaalkaaga Pulse uu wadaagayo, uu jecel yahay, iyo dadka ka faaloonaya saacadaha ugu horeeya ee 48 ee daabacaadda (waydii asxaabta / qoyska / asxaabta). Tani waxay siin doontaa fursada weyn ee lagu helayo LinkedIn.
6. U samee kooxda LinkedIn si toos ah
Soo jeedi rajooyin muhiim ah si aad uga qayb qaadatid kooxdan, wadaag waxyaabo waxtar leh oo la xidhiidha. Markaad sameysid koox, waxaad awoodi mapa inaad la xiriirto oo aad fariin toos ah ugu dirtid xubnaha kooxda.
Fariimaha Gerig: Istaraatijiyad Tallaabo-tallaabo ah
Istaraatiijiga labaad, Oren Greenberg, ayaa kugu hagaya adiga talaabo-tallaabo ah si aad u hesho dadyowga diirada u saaran LinkedIn oo qori boosto weyn oo loogu talogalay baahidooda:
1. Samee boosto qurxoon. Ku dar sawirro (sawirro, fiidiyo, iwm.) Iyo xitaa qayb ka mid ah madadaalada, sababtoo ah "jilicsanaanta iyo bini’aadamku wuxuu ku darayaa heer cusub oo buuxa shabakada cadaanka ah.
2. Raadi bartilmaameedkaaga – waxaad ka heleysaa liiska dadka 50-100 ee aad rabto shabakadaada (marka ugu horeysa ee aad u maleyneyso in ay tahay – waa ay ku haboon tahay, ma akhrin lahayd, waa macluumaad qiimo leh?).
3. U dir codsi shakhsiyeed si aad isugu xirto – u sheeg wax yar oo ku saabsan farriinta xidhiidhka: waxay u socotaa wadada dheer ee qofka kale haddii ay ku arkaan inaad wakhti la qaadatay iyaga. (Eeg Qodobka # 2)
4. Jaantus saar 10-20 kuwaas oo si aad ah loola beegsan yahay oo ku habboon qodobka iyo, ka dib markaad hesho ugu yaraan 10 ee xiriiriyeyaasha cusub ee la beegsanayo ee shabakadaada, daabac boostada oo waliba qaybtaas la wadaag kooxahaas. Waxaad xitaa xitaa wadi kartaa warsideeyaal ka sheekeynaya dhagaystayaasha aad adigu kaliya daabacday maqaal, oo aadan rabin inaad wax iibisid – haddii aad caddeyso qiimaha, dadku waxay kuu iman doonaan adiguna waxaadirah dahisi.
"Tani waxay umuuqataa inay tahay shaqo badan," ayuu yidhi Greenberg, “laakiin natiijooyinku waxay u hadlaan naftooda – mararka qaar xitaa 5k + aragtiyo ku saabsan qodobbadaas iyo in ka badan saamiyada 100. La hadal dhagaystayaashaada oo ku dhamee su’aal – ‘Tani wqahah laha waxaaga ‘- faallooyinka ayaa leh awood aad u badan marka ay ka muuqdaan quudinta dadka, isu imaatinka, iyo kobcinta aragtida.
Adiga ayaa kugu habboon – waa maxay waxa aad karineysid sirta ah ee suuqgeynta wax ku oolka ah ee la xiriirto suuqgeynta LinkedIn? Nala soo socodsiiya kanaalkeena bulshada.
LinkedIn waxay ku xisaabtami kartaa suuq yar isticmaalaya marka la barbar dhigo Facebook iyo
LinkedIn waxay ku xisaabtami картаa suuq yar oo isticmaalaya marka la barbar dhigo Facebook
LinkedIn waxay ku xisaabtami kartı istifadə etmək istər-istəməz Facebook və Twitter-də, Twitter-də, lambradin lambradu
LinkedIn waxay ku xisaabtami kartaa suuq yar isticmaalaya marka la barbar dhigo Facebook iyo Twitter, laakiin lambarradu weli way ku habboon yihiin blogerët iyo maareeyayaasha warbaahinta, gaar ahaan haddii niche ama warshadu tahay Sida laga soo xigtay Statista, LinkedIn ayaa ku do të ketë 450 milion përdorues ayaa isticmaala rubuc 2da 2016, iyo barxadda sii kordhaysa.
Tirada xubnaha LinkedIn laga bilaabo tremujori i 1 2009 2009 ilustrimi i tremujorit të 3-të 2016 (malajiin)
Tirooyinka ka sokow, inkasta oo ay tahay, bulshada ayaa tirinaysa. Iskuxirka ‘InteedIn’ wuxuu ka badan yahay resume-ka tooska ah ee internetka iyo hodantinimada kooxaha adeegsadaha, astaamaha farriinta iyo madbacadda daabacaadda Pulse waxay ka dhigeysaa fursad suuq-geyn weyn.
1 1. Sii Xidhiidhyada Marka hore
2 2. Isticmaal fariimaha / Isgaadhsiinta Shabakada iyo Kordhinta
4 4. Grupi i diskutimit të levave
6 6. Leve tjera 4 Meelaha ugu muhiimsan ee Mawduucyada
6.0.1 1. Foto e profilit
6.0.2 2. Lidhje lidhjesh
6.1 3. Karakteristikat e ngarkimit të skedarëve
6.2 Maxay Muhiim Tahay Në La Sameeyo Muuqaal
8.1 "Si aad uga soo baxdo dadka intiisa badan internetka, waxaa aad loogu talinayaa in aad is dhisto dareen ah kalsooni iyo kalsooni."
9 9. Përditësime të Isticmaal @mentions iyo
12.2 Fariimaha Synimi: Istaraatijiyad Tallaabo-tallaabo ah
LinkedIn waa goob weyn oo lagu kobciyo qaybaha aad ka kooban tahay oo ka kooban dhagaystayaal la xiriira. Waxay sidoo kale ku fiican tahay xayeysiinta adeegyadaaga sababtoo ah awooda ay u leedahay inay beegsato danaha, demograafiga, iyo qaybaha shaqada.
Tani waa isku kalsooni wanaagsan oo ah në LinkedIn la isku dayo, laakiin Oren Greenberg, markhaatiyaal dhijitaal ah iyo agaasime maamul Kurve.co.uk, wuxuu ku darayaa xoogaa makquul ah. Waxa uu eegayaa in [ka dib] dhammaan ololaha imtixaannada ay nagu hayaan annaga iyo hay’ado kale oo dijital ah, natiijooyinka ayaa si aad ah isku mes ah u ah guddiga – LinkedIn ayaa xawileysa iibka heoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao aad u sarreeya. "
Sidoo kale, sida laga soo xigtay Greenberg, LinkedIn Ayaa si fiican u soo bandhigay, natiijooyin wanaagsan oo la siiyey marka la barbardhigo Dhexdhexaadinta Iyo Blogging (haddii Aad HORAY u haysatid daawadayaasha boggan) sababtoo ah LinkedIn waxay si dhakhso ah u ogeysiinaysaa shabakadaada, haddii maqaalkaagu uu yahay mid la wadaagayo, arko martiqaadkaaga korriinka iyo xitaa saamiyada ay ku leeyihiin waddooyinka kale. "
Kor u qaad oo kordhiya iibka iyo fursadaha shabakada
1. Sii Xidhiidhyada Marka hore
Astaamaha aasaasiga ah waxay ka shaqeeyaan LinkedIn sida ay ku Sameeyaan meherad kasta oo kale ee warbaahinta bulshada – waa inaad waqti ku qaadato LinkedIn si aad u dhisto joogitaan. Oo, waa inaad udiyaarisaa isku xirnaanta si aad ugu dambeynta u Sameyso shabakad ku saabsan magacaaga iyo ganacsigaaga.
Waxaan qoray a hagaha aasaaska suuqyada suuq-geynta suuqa ee 2014 in the laga yaabo inaad rabto inaad wax akhrido si aad u bilowdo, waxaanan soo jeedinayaa inaad sidoo kale fiiriso boostada KeriLynn ee ku taal Siday syataaaaa.
Isku dhafka dhismaha kaaqaadka ka hor inta aanad isku dayin inaad ku abuurto gaadiidka adigoo adeegsanaya dhiirigelin
Ogeysiis taxaddar: ah xaqiiqda në LinkedIn loo abuuray xiriirro xirfadeed ma u oggolaanayo dadka isticmaala inay KA fikiraan madal inay yihiin Guddi khayaamo, nasiib darrose LinkedIn wali uma muuqato inay leeyihiin siyaasad xooggan oo KA soo horjeeda dhaqannada shadiida.
Alayna Frankenberry, maareeyaha istaraatiijiga ah ee loogu talagalay Eeg EE BlueSky, waxay soo jeedinaysaa afar siyaabood oo aad ku dhisi kartid joogitaanka LinkedIn oo aad adigu naftaada u samayso mid ka aa dadka aaaaa
1. “Dhis jiritaankaaga hortiisa macaamiishaada.
2. "Waa inaad nënfeksion firfircoonaato.
Jadwal u Samee daqiiqadaha 20 maalin kasta si aad u hubiso ogeysiiskaaga kuu gaarka ah ee loo yaqaan ‘LinkedIn ogeysiisyada’ oo aad la falgasho dhajinta ku qoran quudintaada. Eeg waxa ka dhacaya bulshadaada oo booqo dhowr xog-urursi oo ka socda kuwa kale ee ka shaqeeya wershadahaaga. . “
3. "Noqo mes deeqsi ah."
Frankenberry wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad “ku taageerto asxaabtaada xirfadaha Halka ay ku yihiin fiican” Iyo inaad “u qorto talooyinka shaqaalahaaga, macaamiishaada Iyo maareeyayaashaada, iyadoo aan dylli Lagaa weydiinin. Tani kaliya kuma heli doontid qaar ka mid ah dammaanadaha isku mid ah, ”laakiin sidoo kale waxay hagaajin doontaa jiritaankaaga xiriiriyahaaga ‘waxayna kuu horseedi doontaa booqashooyin badan oo aad ku tagto astaantaada iyo dajaga
Dadka intiisa badani waxay isticmaalaan ‘LinkedIn’ sababtoo ah waxay daneeyaan waxyaabaha ay ka midka yihiin horumarinta xirfadda iyo kobaca ganacsiga. La wadaag waraaqaha bixiya xalka dhibaatooyinka ganacsiga guud iyo talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo gaaro yoolalka. "Frankenberry waxay ku xasuusineysaa inaad" diiradda saarto xalalka halkii aad iskaa u dallacsiin laheyd, "markaa waxaad arki doontaa isticmaaleyaasha" oo soo laaban doona mar labaad si ay ula falgalaan adiga iyo wadaag waraaqahaaga. “
2. Isticmaal fariimaha / Isgaadhsiinta Shabakada iyo Kordhinta
Isticmaal nidaamka isgaadhsiinta Iyo isgaadhsiinta Isgaadhsiinta LinkedIn waxay ku siinaysaa ISKU-xidhka shakhsiyadeed ee xiriiriyeyaashaada KA hor inta aanad soo wacin si Aad ula xiriirto dadka kale ee ku Jira naftaada InMail haddii Aad tahay isticmaale Bixiye ah, ama emaylka qofka ku muuji cinwaankiisa ‘LinkedIn’ oo ka hooseeya tab taabashada).
Waa muhiim inaadan dirin wax farriin ahmiyada-u p.sh.-ah wajiga hore, wajigaan xasaasiga ah. Ka fiirso arrimaha aadanaha:
Fursad aad ku hormarineyso shaqadaada ayaa si dabiici ah u imanaysa iyadoo qofka kale uu xiiseynayo adiga.
Carole Lieberman, MD, wuxuu sharraxayaa muhiimada abuuritaanka xiriirka ku saabsan diritaanka farriinta gudbinta iyo khatarta aad ku maamulayso adiga oo iska indha-tiraya qodobada aadanaha:
Markaad [weydiisid] inaad la xidhiidho qof, ha Sameynin haddii ujeedadaada gaarka ah ay tahay inaad isku daydo inaad ka faa’iidaysato xidhiidhkooda si kor loogu qaado dyll. Marka qof uu sidan iigu Sameeyo, waan la xidhaa iyaga.
LinkedIn runti aad ayey uga badan tahay madal ay xirfadlayaasha iyo shirkadaha ka ganacsadaan danaha. Waa goob lagu dhiso xiriirro, taas oo aakhirkii isu rogi doonta fursado wanaagsan oo labada dhinacba ah.
Eric Brantner, ooasaasaay Scribblr.com, waxay ka talo bixineysaa inaay quureynin wax ku oolka ah aaladda isgaarsiinta ee ‘LinkedIn’ ee isgaarsiinta qaddarinta lacageed (InMail), gaar aaan blogger isaaa.
Furaha ayaa ah in la hubiyo inaad leedahay qeeyb yar, oo si fiican loo dhisay. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hubiso in bartilmaameedku yahay dhagaystayaasha saxda ah ee garoonkaaga.
Sidoo kale akhriso Dan Virgillito 4 Siyaabaha Loo Heli Karo Hogaamiyeyaal Shirkadda LinkedIn ah wixii faahfaahin dheeraad ah iyo macnaha guud.
Tusaale ahaan, fiiri sawir gacmeedka iyo milkiilaha ganacsiga Ed Gandia boostada hoose:
Pulse e LinkuarIn e Ed Gandia-s
Marka, waxaad arkaysaa, maadada ‘Pulse’ ma awoodi karto inay noqoto mid laga xishoodo inay waxtar noqoto.
Carole Lieberman wuxuu yiri, "Markaad soo dirto maqaal, waxaa muhiim ah inaad waqti ku qaadato inaad sawir qaadato oo aad Sameysid cinwaan aad u feejigan. Waxaad doonaysaa në dadku ay joojiyaan ruqsaddooda iyo dhulkooda. "
Si të keni nevojë për të parë, ju do të dëshironi të hapni më shumë Pulse sida dhe ju postimet në blog sida fiican – dylli yar oar, malaha.
Sean Hall, milkiilaha TekBoost, wuxuu ku raacsan yahay in "bixinta bogga internetka ee LinkedIn uu yahay istaraatijiyad aad u wanaagsan oo lagu helo soo-bandhigid dhagaystayaal cusub, iyada oo la adeegsanayo shabakadaada hadda jira," iyo në "ujeedadu tahay in la bixiyo waxyaabaha la wadaagi karo."
Teajai Kimsey, agaasimaha suuqgeynta Crystal Structures Lustrim, waxay u maleyneysaa in qarsoodiga guusa ee LinkedIn uu yahay mid ku hawlan.
Kuma filna in lagu qoro Levelan qoran oo qoraal ah iyo khadka tooska ah. Waa inaad ku dhejisaa waxyaabo si joogto ah u hawl gala dadka adiga kugu xidhan; Waxyaabaha ka baxsan waxyaabaha caadiga ah laakiin maskaxda ka haysta ganacsi. Markii aan dhajiyo waxyaabo wanaagsan, waxaan arkaa baba badan oo eegaya macluumaadkeyga, oo codsanaya xiriiriyaal iyo wixii la mes ah, oo faallo ka bixinaya wixii aan halkaas ku dhaga.
Si KA duwan kooxo kooxeed Iyo faallooyin, waxaad ku kori kartaa hay’ad ku Gjuha naftaada markaad billowdo daabacaadda maqaallo soo jiidasho leh oo cunto u fekeraya magacyada waaweyn Iyo Kuwa yaryar ee bulshadaada LinkedIn, Iyo dadka isticmaala guud Ahaan.
Maskaxda ku hay in boostadaada Pulse ay tahay inay jiraan si kor loogu qaado waxyaabaha ku kooban bartaada, kaliya maahan inaad la wadaagto aqoonta warshadaha bulshada LinkedIn. Tani waa muhiim sababta oo ah waxaad dooneysaa inaad Sare u qaaddo hawlgelinta labadaada muuqaal Iyo Bloggaaga, keli Kuma Ahan labada mesit midkood, marka waxaad dooneysaa inaad ku dhajiso kaliya waxyaabaha Ku habboon waxa Aad horey u sameysay oo Aad dylli ku qorto bartaada.
Kristin Viola, agaasimaha suuqgeynta TheMLS.com, ayaa la ogaaday: "[Waxaa jiray] kor u kaca codsiyada markii aan ku xirannay boggayaga asalka ah ee asalka ah iyo waliba maqaallo ku saabsan CEO-ka ayaa laga soo xigtay. Hal maqaal ah oo aan soo dhajinay (agaasimaha ayaa laga soo xigtay) ayaa ka helay aragtiyo ka badan 1,200. Tan iyo markii aan nahay nidaamka MLS, waxaan mar walba isku daynaa inaan dirno waxyaabaha ku saabsan mulkiilaha munaasibka ah kaas oo ku saabsan dhagaystayaasheena. "
4. Grupi i diskutimit të levave
Waxaa laga yaabaa inay u muuqato in ay u muuqato in ay ku celiso halkan, laakiin ka faa’iideysii kooxaha wada-hadalka ee LinkedIn, ma aha oo kaliya inaad bilowdo adiga keligaa, laakiin adoo ka jawaabaya xeeladalkaaaeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Henry Butler, lataliyaha suuq-geynta CanIRank, waxay soo jeedinaysaa in aad ka qaybqaadatid kooxo xiriir la leh LinkedIn kuwaas oo gaari kara taraafikada la beegsanayo profile iyo blogka:
Mid ka mid ah faa’iidada LinkedIn ee ka jirta kanaalada kale ee warbaahinta bulshada waxaad ka heli kartaa taraafikada bartilmaameed dheeraad ah adoo ku biiraya iyo kor u qaadaya macluumaadkaaga kooxaha bulshada ee la xiriira wars Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad magaca shirkadaada ku horayso dadka u muuqda in ay xiiseynayaan badeecada ama adeegga aad bixiso.
Iyadoo LinkedIn laga saarayo tabinta Gudbinta ee kooxaha, hadda waa ay ka sii muhiimsan tahay inaad aado halka ay dhageystayaashaadu joogaan ayna ka fogaadaan is-kor u qaadida ilaa aad adigu magac u Sameysay.
Julie Graff, xiriiriyaha arrimaha bulshada Suuqa Soodejinta, waxay kugula talinaysaa inaad "hesho oo ku biirto Kooxaha soo jiitay dhageystayaashaada bartilmaameedsan" Iyo "si firfircoon ula shaqeeya, ka jawaab su’aalaha soo bandhociation iyo bixinta macluumaad dylli ku ool ah wadahadalka."
Waxaad sidoo kale (si taxadar leh) uugu soo diri kartaa xiriirinta waxyaabaha aad ubaahantahay, haddii ay tahay mid qiimo badan u leh kooxda oo aaney is-tarin. Isticmaalida kooxahaan sidan waxay gacan ka geysan kartaa dhisida wacyi-gelinta, udub dhexaad u tahay, iyo kaa caawiso inaad dhisid xiriiro dhab ah oo lala yeesho xubno ka mid ah dadka dhageystayaasha ah.
Fikradda kale waa in ku biir kooxaha kooxaha xayeysiinta halkaas oo xubnaha oo dhami ay u joogaan inay gacan ka geystaan ​​horumarinta midba midka kale shaqadiisa. Për më tepër Blog Blog Promovimi i Grupit të Ndërmarrjeve të Ndihmuara, në të gjitha kohërat, në të cilat ju duhet të përdorni blog-un e kartelave, do të gjeni dhe ju lutem.
Wadahadal kooxeed waxay faa’iido u tahay kor u qaadida shabakadaada. Sida Doug McIsaac, oo ah lataliyaha suuq-geynta caalamiga ah TheLinkedCoach.com, faallooyin, "Qodno muhiim ah – marka qof uu ka raadiyo LinkedIn, waxay arkayaan natiijooyinka shabakaddooda marka hore. Haddii aad rabto inaad soo bandhigto raadin dheeraad ah, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso koritaanka shabakadaada. Tani waa mid aad uga muhiimsan haddii aad hayso xalka dadka raadinaya warshado gaar ah. "
Sean Hall waxay kugula talineysaa inay si firfircoon uga qeyb gasho fadhiyada la xiriira Q&A-da warshado ahaan ”hab xoog leh oo lagu dhiso xiriiryo adag isla markaana khibradahaaga warshadaha lagu soo bandhigo. Furaha ayaa ah in la hubiyo in aad ku darsato qiimaha wadahadalka, oo kaliya in aan si cad u aflagaadeyn shirkaddaada ama alaabadaada.
Si të doni dhe sa më shumë, ju do të dëshironi të zgjidhni një përmbledhje të përmbajtjes dhe përmbajtjen tuaj, ju do të gjeni një përmbajtje të mirëfilltë..
Markaad aragto dhagaystayaal boqolaal ama kumanaan, waxaad sidoo kale tixgelin kartaa inaad abuurto koox adiga kuu gaar ah oo aad isticmaasho si aad uga gudubto boosteejadaada.
Doug McIsaac wuxuu kugula talinayaa samaynta cinwaankaaga ” wax ka dheh dyll soo saarka ama adeegga aad soo gudbiso. ‘Waxaan ka caawiyaa macaamiishayda ku habboon inay gaaraan natiijooyinkooda ku habboon’ ama ‘waxaan u soo bandhigo natiijooyin ku habboon macaamiishayda ku habboon’.
Kinemaankaaga sidoo kale wuxuu noqon karaa mid ka badan oo tan: Neil Patel isticmaalaa ‘Bashkëthemeluese në Crazy Egg & Përshëndetje Bar ‘oo waxaan doortay’ Rezultatet e orientuara nga Libri i pavarur, Krijuesi i Krijuesve, Cartoonist ‘naftayda.
Si kooban, McIsaac wuxuu cadeynayaa në:
Maaha adiga adiga – koobnaantaadu waa fursaddaada inaad ku iibiso macaamiishaada mustaqbalka sababta ay tahay inay kula macaamilaan. Waa inuu kuu macneeyo cidda aad la shaqeyso, xalka aad siineyso iyo sida ay kuuula shaqeyn karaan.
Qaado qof leh rabitaan aan xadidnayn iyo danab badan.
Isku daa in uu leeyahay shakhsi sida caruurta oo kale.
Sida aniga oo kale, Sarah Boutwell Geek Powered Studios, waa fikradda ah inaad u isticmaasho qofka koowaad haddii aad qorto astaamahaaga.
Waxay kaa dhigaysaa mid aad cod badan ku yeesho aadanaha iyo sida aad dhab ahaan uga dhigtay fikir iyo dadaal inaad ku qorto nivelinantaada. Astaantaada kaliya maahan rinisë, waxay u badantahay aragtida shaqsiyeed ee aad tahay xirfadle. Ha ilaawin inaad kudarto waxa kaa dhigaya qof weyn oo shaqeeya la, ma ahan oo keliya waayo,.
Ugu dambeyntii, sida shakhsi ahaaneed ee kooban ee aad soo koobi doonto adiga kugu habboon, laakiin xusuusnow tani waa qalab iibin oo ahayn waraaqo.
6. Leve tjera 4 Meelaha ugu muhiimsan ee Mawduucyada
Mid kasta oo ka mid ah goobahaasi wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto macluumaad gaar ah profile-gaaga oo kaa caawin doona inaad soo jiidato jidka toosan.
Marka, marka lagu daro cinwaankaaga iyo koobigaaga (Sharciga # 5), waxaad abuuri kartaa aragti fiican.
1. Foto e profilit
Dareenka koowaad ee tirinta, marka marka aad ku dhejiso sawirkaaga sawirka, hubso in tani ay tahay mid saaxiibtinimo, nadiif ah o xirfad leh.
"Xiriirka ugu weyn ee LinkedIn waa sannadihii 30-50," ayuu yiri Hewitt. "Kooxdan da’da ah waxay inta badan ku noolyihiin shaqsiyaadka leh dhaqdhaqaaqyo isdaba-joog ah oo ku saabsan shaqada, dhaqdhaqaaqyada bulshada, dhacdooyinka qoyska iyo wax ka badan! Fure u ah helitaanka dareenka inta lagu jiro boodh gaaban oo ku saabsan feedhadeeda LinkedIn waa in la helo sawir cajiib ah oo la socota cinwaanka gaaban laakiin xiiso leh taas oo ka dhigi doonta inay joojiyaan oo wax bad. "
Taas macneheedu waa sawirkaaga sawirkuaga waa inuu si fiican u shaqeeyo cinwaankaaga oo u eeg sida ugu fudud ee suurtagal ah natiijooyinka wanaagsan.
2. Lidhje lidhjesh
Falas shkarkuar Pamje Eksitim për Blog Blogs, Zgjedhur Ebooks Ebooks lacag la’aan ah sida daabacaadda ku saabsan xiriirka LinkedIn.
3. Karakteristikat e ngarkimit të skedarëve
Shaashadda kor ku xusan waxay muujineysaa sida aan kuugu darey sawiradaada loogu talagalay Machadyada Institute for Writing Writing ee khibradda shaqada ee la xidhiidha qaybta "vazhdoj" qaybtayda.
Waxaad faylasha faylasha u gudbin kartaa qaybtaada kooban, khibradaha iyo qaybaha waxbarashada. Kuvani waa kumbiyuutarradaada, caddaynta koowaad ee khibradaada iyo khibradaada.
Tan iyo markii LinkedIn uu xayeysiisay SlideShare ee 2012, bogga si sahlan ayaa looga heli karaa shabakadda bulshada, si fudud ayaad kuugu soo dari kartaa bogaggaaga iyo bandhigyadaada si aad u hesho qof walba si si.
Maxay Muhiim Tahay Në La Sameeyo Muuqaal
"Muuqaaladu waa mid ka ka mes ah waxyaabihii isha kuugu xirnaa ee ku xirnaa bogga LinkedIn ama bogga ganacsiga," ayuu yiri Sarah Boutwell. Kuvani waxay noqon karaan fiidiyoow, sawirro, calaamado, isku xirnaanta, sawirada sawirada, shaashadaha iyo sawirada.
Boutwell waxay si aa kuugula talineysaa inaad isticmaasho SlideShare, “Tao oo kuu oggolaaneysa inaad abuurto xog-is-weydaarsi macluumaad ah.” Ka eeg qaanuunka # 6 wixii talo bixin ah haddii aadan mar hore aqrin.
Ugu dambeyntii, waxaad ku dari kartaa muuqaalada Xiriirka xirfadeed ee LinkedIn, "Kaas oo kuu ogolaanaya inaad abaabushid oo aad naqshadayso dhammaan waxyaalihii muuqaalka iyo isdhexgalkaaga."
Isticmaalayaal badan Ayaa inta badan Iska indhatira astaantan, waxayna ku xadidaan inay adeegsadaan farriinta xayeysiiska ah ee ‘LinkedIn googgeeyaha’ – Waxaan jeclaan lahaa inaan kugu soo daro shabakaddayda mihnadlaha ah ee ‘LinkedIn’ – laakiin markii si wanaagsan loo isticmaalo, muuqaalku wuxuu isu beddelaa qaab cajiib badan o xoog badan. si loo dhiso aaminaad iyo aaminaad.
Ama xitaa ka sii fiican:
Fariin hordhac ah o fariin:
Hi! Luana Spinetti halkaan. Bloggeri Waxaan ahay fadhigiisu yahay talyaaniga oo si xariifnimo leh u robots jecel, sidaada oo kale. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo ka hadalka waxyaabaha xiisaha leh ee aan wadaagno! Ma jeclaan lahayd inaad ku xidho?
Talooyinka waa dib u eegis, iyo dib u eegista gaadiidka, iibinta iyo sumcadda indhaha labadaba iyo xirfadlayaasha kale.
Alexa Kurtz, istaraatiijiyadda suuq-geynta WebTek, si fiican u fahmaa waxa lagama maarmaanka u ah ganacsiga:
Haddii aad dalban lahayd shey internetka ah oo ay soo bandhigaan laba shirkadood, side side u go’aansan laheyd shirkadda aad ka iibsaneyso? Laga yaabee inaad isbarbar dhig ku Sameyso qiimaha shirkadda A iyo kan kale sida shirkad waliba ula dhaqanto shaqaalahooda, laakiin waxaad u badan tahay inaad raadineyso dib u eegista khadka tooska aa ama saaxiibada weydi.
Profili i Kurtz ayaa in sidan oo kale ay ku dhici karto Profili i LinkedIn:
"Si aad uga soo baxdo dadka intiisa badan internetka, waxaa aad loogu talinayaa in aad is dhisto dareen ah kalsooni iyo kalsooni."
Si kastaba ha noqotee, talooyinka ayaa kaliya shaqeeya haddii ay run yihiin (haa, qof ayaa dhab ahaantii tagi kara oo hubi haddii waxa la sheegayo ay run tahay!). Iyada oo maskaxda lagu hayo, ayaan mar kaliya u soo bandhociation sawirkayga bilaashka ah shabakaddayda iyada oo lagu beddelayo talooyin daacad ah oo loogu talagalay shaqada la qabtay ama akhristayaasha faraxsan ee akhristayahe.
Natiijada? Waxaan lahaa jawaabo wanaagsan oo ka helay talooyinka ugu sareeya ee akhristayaasha faraxsan, iyo mid ka mes ah joornaalada kale ee dhabta ah waxay dhab ahaantii sheegteen iyada oo bilaash ah (waxaad arki kartaa halkan).
9. Përditësime të Isticmaal @mentions iyo
Waxaad isticmaali kartaa @therions ee comments komente ose tema, nëse ju doni të bëni shaka, ju do të gjeni përmbajtje dhe përmbajtje tuaj, dhe në Twitter.
Waxaad wici kartaa "bogga" labadaba boggaga iyo boggaga shirkadda, markaa waxa ay ku saabsantahay dhab ahaantiiso badan oo ka mid ah shabakadaada.
Markii la daabacay, ma u adeegsan kartid wax ku saabsan qoraallada ‘Pulse’, laakiin runti waad faallo ka bixin kartaa boostadaada oo waxaad ku dari kartaa halkaas meesha ‘wac’ ilaha aad soo xigatay qoraalka.
Waxaad sidoo kale KA qori kartaa cusboonaysiinta boodhadhkaaga ‘LinkedIn Paneli’ waxayna yihiin hab waxtar leh oo lagu helo indhaha dadka waxa ku Jira, isla markaana lagu abaal mariyo taraafikada, faallooyinka Iyo waxyaabaha la jecel yahay, maadaama ay u shaqeeyaan sida ISKU-dhafka Facebook Iyo Cicëroj.
Sean Hall wuxuu u fidiyaa faa iidada xitaa xisaabaadka shaqaalaha, haddii aad shaqaale leedahay. "Hubso in shaqaalahaagu ay si joogto ah ugu dhajin karaan waxyaabaha laxiriira wershadaha akoonkooda shaqsiyadeed, kuwaas oo kuxiran bogga shirkaddaada," ayuu yiri. "Waa inay sidoo kale la wadaagaan cusboonaysiinta kuwa raacsan si ay u kordhiyaan gaaritaanka iyo hawlgelinta."
Bogagga shirkadu maaha kuwo ka muhiimsan profile-kaaga. Waagii hore, waxaan u maleynayay inay ahaayeen iyo waxaan boogaadinayey in badan oo ka lumay taraafikada iyo ka-qaybgalka baqashadayda.
Adi ayey muhiim u tahay në loo dhiso joogitaanka Khadka internetka ee ganacsigaaga ama blog-gaaga Iyo bogagga shirkaduhu waa aalad bilaash ah oo weyn oo Adi ku kasban karto taageerayaashaada Iyo dadka ku dhaqanaga ama warshadahaaga oo ku lug leh cusbooneysiinta gaarka ah ee la xiriira bartaada, kaliya maahan naftaada. (Adeegso talooyinka si aad hawsha u fududeyso! Eeg Xeerka # 9.)
Në aad haysato bog shirkadeed waxay kuu ogolaaneysaa inaad la shaqeysid taageerayaashaada, la wadaagno fursadaha shaqo ee suurtogalka ah, iyo inaad noqoto mid lagu kalsoonaado bulshada dhexdeeda. Waxa kale oo ay noqon kartaa goob kale oo aad ku wadaagtid dyll kasta oo cusub oo aad sii deyneyso waana hab weyn oo aad kuugu soo celin karto boggaga internetka. LinkedIn waxay kaa caawin kartaa inaad ka takhalusto tartamayaashaada, halka sidoo kale kaa caawinaya inaad iska hubiso waxa ay tartankaagu qabanayaan.
Xaqiiqdii, ka faa’iideysiga kanaalka kaniisadan – oo sidoo kale la yimaada baaritaankeeda u gaar ah si loo kormeero sida waxtarkaagu uugu cusboonaado – waxay ka faa’iideysan kartaa istiraatiijiyada suuqgeynta Linked.
Si kastaba ha ahaatee, Swapnil Bhagwat, oo ah maamulaha sare ee Orchestrate Technologies, LLC, wuxuu ka Digayaa in "haysashada bogeeda shirkadda LinkedIn iyo ku dhajinta waxyaabaha ku saabsan sida iyo marka aad jeceshahay inaysan ku wadi karin ka qaybqaadashada la rabo. Caqabada ah in la qabsado [fiiro gaar ah] isticmaalka LinkedIn waa mid aad u kacsan, iyo in aad hesho muuqaalkaaga muuqaalka u baahan yahay dadaal dheeraad ah. "
Intaasi kuma filna, in la haysto bog shirkadeed. Waa inaad sii noolaataa oo aad haraysaa si aad uga qaybgasho dhagaystayaashaada oo aad uga faa iideysato. Sidee? Bhagwat wuxuu soo jeedinayaa:
Ku jeni i dashur të LinkedIn në internet nuk është në dispozicion për të Blerësit dhe HootSuite. Sidoo kale [waxaad ku Gaari kartaa] qaybo kala duwan [oo leh] Xulashada synuar, taas oo u oggolaanaysa shirkadaha inay bartilmaameedsadaan dhagaystayaal Gaar ah – oo ku saleysan naafanimada Iyo shaandhooyin kale – oo leh waxyaabo Gaar ah.
Hall wuxuu kaloo ku daray in bogga shirkadda ‘LinkedIn’ uu ku oggolaanayo inaad la xiriirto macaamiisha suurtagalka ah adigoo la wadaagaya waxyaabaha la xiriira websaydhka, ashtueybgal fadhiyada Q&A, ama xitaa soo bandhigid wicitaan ficil soo koobitaankaaga. "
Taasi waa waxyaabo badan oo aad ku guuleysan karto marka loo eego astaçantaada guud!
Kelvin Jiang, CFA, aasaasaha Fokus Buyside, waxay isticmaashaa LinkedIn si ay ugu suuq geyso meheraddiisa oo ay u soo saarto inta badan wadooyinkiisa. Tilmaanta Jiang waa "në la cusbooneysiyo shirkaddaada oo la taabto oo la beddelo."
Ka feker mawduucyada la xidhiidha dhegeystayaashaada oo ku dheji kara xiriirro tayo sare leh bogga shirkaddaada. Tani waxay ku jiri doontaa akhristayaasha blogka ee kuboboon, sawirada, fiidiyowyada, iyo jadwalka wareega ee shabakadaada internetka. Dadka raacsani waxay arki doonaan xiriirinta mawduucaaga si toos ah bogooda hore ee LinkedIn, taas oo keenta isbedel sare. Tani waa hab weyn oo lagu gaari karo gaadiidka shabakadaada iyo soo jiidashada taageerayaal dheeraad ah bogga shirkaddaada.
Dhanka cusboonaysiinta, Sarah Boutwell waxay kugula talineysaa inaad ilaaliso ”joogteyn ku dhajinta boggaaga ganacsiga. Haddii khibradeyda maareeyaha warbaahinta bulshada ay i bartay wax walba, waa in waqtiga iyo joogtayntu ay yihiin labo ka mes ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee maskaxda lagu hayo markii la isticmaalayo baraha bulshada.
LinkedIn waa jawi xirfad badan oo hubaal ah, laakiin taasi micnaheedu maahan inaadan noqon karin bulsho isla markaana aad u tagtid xubnaha shabakadaada haddii aad u maleyneyso in wax aad soo dhejiso ay iyaga khusayso. A është dhajinta badanaa kishte iyo jeer waa wax u fiican ka qeybqaadashada iyo në sumaddaada halkaas uun lagaaga helo. Si kastaba ha noqotee, ha ku buufin qof kasta. Hubso inaad ku daro noocyo kala duwan, sida ku darista sawir ama soo bandhigida SlideShare markasta iyo ka dib.
Qeybta ugu hooseysa ee bogagga shirkadda LinkedIn, sida Jiang ayaa dhigeysa, waa:
Haddii aadan waqti iyo maal aad u badan u qoondeyn karin suuq-geynta gudaha, waxaad kishte iyo jeer ku xayeysiin kartaa LinkedIn.
Sean Martin wuxuu kugula talinayaa inaad “hagaajiso ololehaaga aad beegsatay [oo aad] iskuday inaad geliso liistada liistada liisada ama cinwaanka emaylka ee LinkedIn, sidaa darteed waad yareyn kartaa dhagaystayaashaaya Kadib waxaad isticmaali kartaa LinkedIn si Aad Ugu dirto xayeysiimaha tooska ah ee aargoosi u ah isticmaaleyaashan sidoo kale waxaad u abuuri kartaa dhagaystayaal la mesit ah si Aad Ugu badiso tirakoobka dadka isticmaala ee Aad awood u yeelatay inaad KA soo saarto. Waa nooc ka mes ah cuntada loo isticmaalo soo celinta guulihii hore ee jiilka hoggaaminta. “
Waxaad sidoo kale "postime isticmaali kartaa postime të sponsorizuara oo ku xiran bogagga soo degsan halkii laga heli lahaa qaybo" iyo Martin wuxuu sharxayaa sida:
Waxaa jira laba nooc oo ah xayeysiisyada LinkedIn waxaad u isticmaali kartaa mawduucaaga ama boggagaaga. Marka ugu horeysa waa xayeysiiska caadiga ah ee caadiga ah, tan labaadna waa xayeysiisyo maalgalin ah. Midka labaad waa ka weyn oo isticmaal sawirro si loo xayeysiiyo halkii laga heli lahaa qoraalka qoraalka caadiga ah. Waxay u arkaan guji sare oo loo marayo heer ka sarreeya xayeysiisyada caadiga ah, taas oo macno samaynaysa.
Carey Dodd, maamulaha suuq-geynta Siren Group, iyo Oren Greenberg, labadooduba waxay wadaageen istiraatiijiyad-tallaabo tallaabo tallaabo ah ee ay uga faa’iideysan karaan kuwa loo yaqaan ‘LinkedIn’. Waxaad ka heli doontaa inta badan talooyinkii lagu siiyey xeerarkii hore, oo ay kujirto xoogaa aragti gaar ah oo ka so so baxday khibraddooda tooska ah.
Carey Dodd ayaa sheegtay në "fure u ah helitaanka maadadaada la ogaaday in ay sii socoto ngrohtë", iyo në ay taas Sameeyaan:
1. Qeex niveamaha udub dhexaadka u ah shirkaddaada oo u Samee waxyaabo u gaar ah mid kasta
Tusaale ahaan, Taxanaha Siren Group waxaa ka midi ah helitaanka biilasha Nafaqada Caymiska, Shirkadaha Fashion E-Commerce iyo kuwa horumarinta ciyaaraha Bulshada.
2. Deji LinkedIn vitrina bogga mid kasta oo ka mid ah xaglahaaga
Iyadoo la isticmaalayo miisaan yar, isticmaal Isticmaalka LinkedIn si aad ogo dallacdo boggagaaga blog-ka ku është bogga bandhigga (Samee dhagaystayaasha la beegsanayo natiijooyinka ugu fiican). Tani waxay kaa caawineysaa inaad kor u qaado taageerayaasha boggaaga.
Hubi në maqaalkaaga Pulse uu wadaagayo, uu jecel yahay, iyo dadka ka faaloonaya saacadaha ugu horeeya ee 48 ee daabacaadda (waydii asxaabta / qoyska / asxaabta). Tani waxay siin doontaa fursada weyn ee lagu helayo LinkedIn.
Soo jeedi rajooyin muhiim ah si aad uga qayb qaadatid kooxdan, wadaag waxyaabo waxtar leh oo la xidhiidha. Markaad sameysid koox, waxaad awoodi kartaa inaad la xiriirto oo aad fariin toos ah ugu dirtid xubnaha kooxda.
Fariimaha Synimi: Istaraatijiyad Tallaabo-tallaabo ah
1. Samee boosto qurxoon. Ku dar sawirro (sawirro, fiidiyo, iwm.) Iyo xitaa qayb ka mes ah madadaalada, sababtoo ah "jilicsanaanta iyo bini’aadamku wuxuu ku darayaa heer cusub oo buuxa shabakada cadaanka ah.
4. Jaantus saar 10-20 kuwaas oo si aad ah loola beegsan yahay oo ku habboon qodobka iyo, ka dib markaad hesho ugu yaraan 10 ee xiriiriyeyaasha cusub ee la beegsanayo ee shabakadaada, daabac boostada oo waliba qaybtaas la wadaag kooxahaas. Waxaad xitaa xitaa wadi kartaa warsideeyaal KA sheekeynaya dhagaystayaasha Aad adigu kaliya daabacday maqaal, oo aadan Rabin inaad dylli iibisid – haddii Aad caddeyso qiimaha, dadku waxay kuu iman doonaan adiguna waxaad dhisi kartaa xiriir Iyo laga yaabaa inaad kasbato macaamilka nolosha.
"Tani waxay umuuqataa inay tahay shaqo badan," ayuu yidhi Greenberg, “laakiin natiijooyinku waxay u hadlaan naftooda – mararka qaar xitaa 5k + aragtiyo ku saabsan qodobbadaas iyo in ka badan saamiyada 100. La hadal dhagaystayaashaada oo ku dhamee su’aal” waxaaga ‘- faallooyinka ayaa leh awood aad u badan marka ay ka muuqdaan quudinta dadka, isu imaatinka, iyo kobcinta aragtida.
LinkedIn waxay ku xisaabtami mapa suuq yar oo isticmaalaya marka la barbar dhigo Facebook
جوجل كبار المسئولين الاقتصاديين وقضية MyBlogGuest – حان الوقت لعكس الأدوار!